म किन प्रमाणित खाताहरू घृणा गर्दछु Martech Zone
म किन प्रमाणित खाताहरूलाई घृणा गर्दछु
सोमवार, जुन 3, 2013 सोमवार, जुन 3, 2013 Douglas Karr
राम्रो साथी, जेसन फल्स, एक राम्रो फेसबुक अपडेट कुनै सामाजिक मिडिया व्यक्ति lambasting थियो जो एक फेसबुक को लागी साइन अप प्रमाणित खाता। उसको अपडेट कामका लागि सुरक्षित छैन, तर यसले सामाजिक मिडिया शक्तिहरू-त्यो-हुनको साथ धेरै हलचल सिर्जना गर्‍यो। मान्छेहरु को लागी उनको टर्म "d" को साथ शुरू भयो र "बैग" मा समाप्त भयो, hehe।
A प्रमाणित खाता ट्विटर वा फेसबुकमा व्यक्तिको प्रोफाइलमा स्पष्ट सानो हरियो वा निलो चेक मार्कद्वारा दर्साइएको छ। प्रमाणितको सरल अर्थ भनेको ट्विटर वा फेसबुकले यो सुनिश्चित गर्न समय लिए कि खाताको पछाडिको व्यक्ति त्यो व्यक्ति हो जुन तपाइँलाई लाग्छ उनीहरूलाई लाग्छ। सतह स्तरमा, यो एक महान विचार जस्तो लाग्छ ... हामी मान्छे धोकामा परेको चाहँदैनौं।
म घृणा गर्छु प्रमाणित खाताहरू केही कारणका लागि:
सबैले आवेदन गर्न सक्दैनन् - को रूप मा स्कट मोन्टी यो राख्नुहोस्, १% सँग प्रमाणित खातामा पहुँच छ। किन सबैलाई छैन? जब मैले गुगल + लाई मेरो व्यापार प्रमाणित गर्‍यो, मैले यसलाई चाँडै गर्न र कुनै परेशानी बिना सक्षम भएँ। यो सबैका लागि खुला थियो।
यो अधिक हो - सबै वेबमा दृश्यमान छ। यो सुरक्षित वेबसाइटको लागि हरियो पट्टी हो कि, उच्च प्रशंसक वा अनुयायी गणना, एक विकिपीडिया पृष्ठ, वा प्रीमियम वेबसाइटबाट ब्याज, वेबमा प्रभाव र भरोसाको प्रत्येक सूचक मामलाहरु र मानिसहरुको व्यवहार अनलाइन लाई प्रभाव पार्छ।
किनभने त्यहाँ haves र सँग nots छ प्रमाणित खाताहरू, प्रजातान्त्रिकरणले पछाडि सिट लिन्छ। अब केहि व्यक्तिले उनीहरूको बृद्धिलाई गति दिनेछ - उनीहरूको नेटवर्क प्रदान गर्ने मूल्यका कारणले होइन - तर तिनीहरूसँग थोरै हरियो वा निलो चेक मार्क छ। त्यो चेक मार्कले "म अरू सबै भन्दा बढि महत्वपूर्ण छु" भनेर डिक्री गर्दछ र यसको परिणाम स्वरूप, फ्यानहरू र निम्नलाई गति प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं मलाई विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईं यो व्यवसाय मा अहंकार बुझ्न छैन। व्यक्तिहरू यी प्रमाणित खाताहरू पाउनको लागि खराबी गरिरहेका छन् ... कुनै जनाईएको छैन कि कोहीले पनि उनीहरूको पहिचान अनुचित रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तिनीहरू प्राप्त गर्नका लागि तिनीहरू डराउँदछन् किनभने तिनीहरूलाई थाँहा छ कि थोरै हरियो वा निलो चेकमार्क सुन हो। यसले ठूलो अनुसरण गर्ने, बढी बोल्ने र लेख्ने अवसरहरू, र - अन्तमा - अधिक व्यापारको लागि नेतृत्व गर्दछ। व्यक्तिगत योग्यताको कारणले होईन, तर दृश्यात्मक चेकमार्कको कारणले हो।
प्रमाणीकरण प्रक्रिया जो कोहीले यसलाई खोल्नुहोस्। जसरी हामी SSL प्रमाणपत्र वा गुगल + व्यवसायका लागि आवेदन गर्छौं, त्यहाँ एक पद्धति राख्नुहोस् जहाँ सबैलाई आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्ने अवसर हुन्छ। यो सबैको लागि गर्नुहोस्, वा यो कहिले पनि नगर्नुहोस्।
तपाईंको मार्केटिंग रणनीतिको विंगहरू के हुन्?
मेल्टवटर बज सामाजिक मिडिया मार्केटिंग सुइट
जुन २,, २०१ बिहान :3:२२ बिहान
हामी सबै लामो समयदेखि के सोचिरहेका छौं भन्दैमा धन्यवाद!
उपलब्ध खाताहरूले असुरक्षित पूर्ण सुरक्षा ट्रिगर गर्नेछ। मलाई यो मन पर्दैन